Letter No: EM (LG) 033/2020
Life is relatively normal within the gates of Pun Hlaing Estate and this only made possible by the community taking precautions for the best interest of all. Please take care when you are moving around the Estate and ensure you are wearingamask and socially distancing yourself from others.
Here are further details on the ongoing COVID-19 precaution and actions we have in place in an effort to preventafull lockdown of the Estate. The situation is rapidly evolving and we will be undertaking the following measures to limit access and reduce density in the Estate:
Please be informed that AK gate (gate next to condo G) and GCC gate (gate behind the Estate Management Office) will be closed temporarily from Wednesday (16 September) to better control the ability to contact trace.
Limiting group events and limiting gatherings.
Visitors at the main gate will have to scanaQR code for name and contact number registration which will help us to contact trace for entry of each facilities in the estate (dedicated QR codes will be allocated at the entrance of Country Club, Club Lounge, Sales and Leasing Gallery, Restaurants, Country Store and Hotel.)
We would like to remind residents that, as one of the preventive measures, the Management encourages all owner-occupiers and tenants to update the family registration by 30th September, 2020. Please refer to the attached file at the end of this announcement; the following information is mandatory and we will be issuing resident ID cards:
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှာတော့ နေ့စဥ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ရှိလို့နေပါတယ်။ ယခုလိုမျိုးပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နေနိုင်တာကလည်း အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများက ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို အကောင်းဆုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသွားလာတဲ့အခါမှာလည်း နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်ပြီး တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေထိုင်ကြရင်း ဂရုတစိုက်နဲ့သွားလာကြဖို့ ထပ်မံအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
အိမ်ရာဝင်းကို Lockdown ပြုလုပ်ရခြင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ လက်ရှိတွင် အခြေအနေများမှာ လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းတွင် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကို လျော့ချရန်နှင့် ဝင်ထွက်သွားလာမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Condo G ဘေးမှ ဂိတ်ဖြစ်သော AK ဂိတ် နှင့် အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးရုံး အနောက်ဘက်ရှိဂိတ်ဖြစ်သော GCC ဂိတ် များကို ၁၆ ရက် စက်တင်ဘာလ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစတင်၍ COVID-19 လူနာ (သို့မဟုတ်) သံသယလူနာနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများရှိခဲ့ပါက ထောက်လှမ်းရှာဖွေခြင်း (contact tracing) များကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ယာယီပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လူအများစုဝေး၍ လုပ်ဆောင်ရသည့် ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ စုဝေးခြင်းများကို ကန့်သတ်မှုပြုလုပ်သွားမည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းလာရောက်သောဧည့်သည်များအနေနှင့် ပင်မဂိတ်တွင် QR code ကို scan ဖတ်၍ အမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပတ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိမည်သည့်နေရာသို့သွားရောက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို သိရှိနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထောက်လှမ်းရှာဖွေမှု (Contact Tracing) ကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (Country Club၊ နားနေဆောင်၊ အရောင်းနှင့်အငှားခန်းမ, စားသောက်ဆိုင်များ၊ Country Store နှင့် ဟိုတယ်များ၏ ဝင်ပေါက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ QR codes ပုံစံအသီးသီးကိုထားရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။)
ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ အိမ်ငှားများအနေဖြင့် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်မှတ်ပုံတင်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။ အသိပေးကြေညာစာအဆုံးတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ ပါရှိပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် သက်သေခံကတ်ပြားကို ရရှိရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။